प्लाक्सो अल्फा पूर्वावलोकन | Martech Zone
सोमवार, मे 28, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
म एक ठूलो प्रशंसक भएको छु प्लाक्सो जबदेखि मैले यो पहिलो पटक देखेको थिएँ। म ठेगाना सेल अनलाईन र अफलाईन एक दर्जन स्थानहरुमा मेरो सेल फोन सहित राख्छु। थप रूपमा मसँग लिंक्डइन खाता छ। ती सबैको शीर्षमा राख्नु गाह्रो छ ... यदि यो प्लाक्सोका लागि नभएको भए।
कल्पना गर्नुहोस् यदि तपाईले चिनेका सबैले आफ्नो ठेगाना जानकारी तपाईको ठेगाना पुस्तिकामा राखेका छन ता कि तपाईंले त्यसलाई कहिले पनि छुनुपर्दैन… त्यो प्लाक्सो हो! तपाईं आफ्नो सम्पर्कहरूमा 'सदस्यता लिनुहोस्' काम वा घर जानकारी को प्लाक्सो मा र जब तपाईं आफ्नो ठेगाना पुस्तकहरू सिंक गर्नुहुन्छ, प्लाक्सो बाँकीको ख्याल राख्दछ। त्यहाँ एक धेरै बुद्धिमान डे-डुपर पनि छ जुन २ वा अधिक कार्डबाट जानकारी एकत्र गर्दछ र तपाईंलाई मर्ज हेर्न र यसलाई अनुमोदन गर्न अनुमति दिन्छ।
मैले आज दिउँसो प्लाक्सोमा लग इन गरें र अचम्मको आश्चर्य भयो - लगइनबाट प्लाक्सो पूर्वावलोकनको लागि आमन्त्रित थियो। जब मैले यसलाई क्लिक गरेको थिएँ, मलाई एक अद्भुत नयाँ प्लाक्सो गृह पृष्ठमा ल्याइएको थियो - जसमा एक एड्रेस बुक, क्यालेन्डर, मेरा सबै सिंक स्रोतहरू र केही नयाँ आईटमहरू पनि समावेश छ, जस्तै मेबोबाट ब्राउजरमा आधारित इन्स्ट्यान्ट सन्देश, ईकार्ड, कार्यहरू, नोटहरू, मौसम, याहू द्वारा नक्शा र Jahah द्वारा IP बाट भ्वाइस कल गर्न पनि क्लिक गर्नुहोस्!
जो मसँग जति नेटवर्क गर्दछ को लागी, यो उपकरण हुनु पर्छ! म यसलाई चाँडो र प्रयोग गर्न सजिलो एक शानदार दुबला ईन्टरफेसको साथ मोबाइल ब्राउजर मार्फत पहुँच गर्न सक्दछ।
.NET ब्लगिंग प्लेटफार्म
मई 28, 2007 मा 8: 41 PM
हो! मलाई मात्र मन पर्छ 🙂
मई 29, 2007 मा 4: 39 एएम
के तपाइँ प्रिमियम सेवा प्रयोग गर्नुहुन्छ? केहि प्रीमियम सुविधाहरू जस्तै 'सम्पर्क डे-डुपर' समावेश गरिएका चीजहरू हुन् जुन साँच्चिकै मानक सेवामा हुनुपर्दछ, तर म व्यापारको मामला बुझ्न सक्दछु किन यो छैन। तर म मेरो लिंक्डइन प्रोफाइलसँग एकीकरण गर्ने विचारलाई मन पराउँछु।
र मोबाइल पहुँच पनि ठूलो फाइदा हुनेछ, जबकि मैले पहिले नै मेरो N95 मार्फत ठेगाना पुस्तिका समक्रमण गर्न मेरो म्याकमा iSync प्रयोग गरिरहेको छु। तर यसले चीजहरूलाई सरल बनाउँदछ कि ती सबै एक स्रोतबाट आउँदछ।
मई 29, 2007 मा 7: 52 एएम
हो, म प्रीमियम सेवा को लागी भुक्तान गर्छु। नयाँ सिnc्क तपाईंको म्याक ठेगाना पुस्तक र iCal का साथ सिंक हुनेछ! डे-डुपर हुनै पर्छ, म सहमत छु।
टोनी चुंग डट CA
मई 29, 2007 मा 11: 47 एएम
ठीक छ डग, मैले कूल-सहायता पिएँ र आउटलुकको लागि उपकरणपट्टी डाउनलोड गरें। मलाई यकिन छ कि मैले यही खोजिरहेको छु। राम्रो!
मई 29, 2007 मा 7: 43 PM
तपाईं निराश हुनुहुने छैन, टोनी! मैले तपाईंलाई होस्टिंगमा गलत बाटोमा डो ?्याएको छैन, हैन? 🙂
मई 30, 2007 मा 11: 06 एएम
तपाईलाई स्वागत छ, डग।
जुन 14, 2007 मा 9: 39 PM
तपाईंले जाँच गर्नु पर्छ spock.com। म मेरा सबै प्लेटो सम्पर्कमा सारियो spock.com। यो पूर्णतया राम्रो अनुप्रयोग हो। यो प्लाक्सो हुनुपर्दछ।
जुन 14, 2007 मा 10: 38 PM
मैले स्पोकको लागि आमन्त्रितको लागि आवेदन दिएँ, तर मैले देखिन कि यसले प्लाक्सोलाई कसरी हराउन सक्छ। मँ हावा दिनेछु, यद्यपि!